Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Thailandy » Faritany malaza any Thailandy amin'ny alàlan'ny fampandrenesana COVID-19 Deep Red
Bangkok, Chonburi, Chiang Mai, Nonthaburi, Pathum Thani, ary Samut Prakarn dia voasokajy ho faritra fifehezana ambony sy henjana (mena midorehitra) ao Thailand izay nametrahana fameperana fanampiny.
Ny Ivotoerana ho an'ny mpitondra tenin'ny COVID-19 Situation Administration (CCSA), dia nanambara fa nanaiky izy ireo hanamafy ny fepetra fisorohana sy fanaraha-maso COVID-19.
Ny faritra dia sokajiana ho fanaraha-maso faran'izay avo sy henjana, fifehezana ambony indrindra, na faritra fanaraha-maso.
Ny fanairana avo lenta dia miteraka fandrarana sy fanidiana fanampiny.
Dr. Taweesin Visanuyothin, ivon'ny mpitondra tenin'ny COVID-19 Situation Administration (CCSA), dia nanambara fa nanaiky izy ireo hanamafy ny fepetra fisorohana sy fanaraha-maso COVID-19. Fananganana indray ny Thailand nekena ny faritra fanaraha-maso toy izao:
1) faritry fifehezana faratampony sy henjana: faritany 6,
2) faritra fifehezana ambony indrindra: faritany 45, ary
3) faritra fanaraha-maso: faritany 26. Ny Quarantine amin'ny endriny rehetra dia nitarina 14 andro ihany, raha ny sehatra miankina na tsy miankina dia tsy maintsy mieritreritra ny miasa mafy any an-trano mandritra ny 14 andro.
Fepetra fanampiny noho ny fanairana avo lenta dia ahitana: